Uma uzazi ukuthi ungubani, ungakwazi ukumelana nezinkinga ekuphileni
Ukuzazi kusho okungaphezu kokwazi igama lakho nokuthi ubukeka kanjani. Kuhlanganisa izinto ozibheka njengezibalulekile, izinto ozikholelwayo nobuntu bakho.
Uma uzazi ukuthi ungubani uyakwazi ukumelela lokho okukholelwayo, kunokuba uvumele abangane bakho balawule indlela owenza ngayo.
“Abantu abaningi bafana nonodoli okukhangiswa ngabo izimpahla ezitolo. Abazikhetheli izinto abafuna ukuzigqoka.”—U-Adrian.
“Sengiyakwazi ukumelela okuhle, ngisho noma kunzima. Abangane bami bangempela ngibabona ngendlela abaziphatha ngayo, nangendlela mina engiziphatha ngayo uma nginabo.”—UCourtney.
OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Yekani ukulolongwa nifane nalesi simiso sezinto, kodwa maniguqulwe ngokushintsha ingqondo yenu.”—Roma 12:2.
Lwazi uhlobo lomuntu oyilo njengamanje nohlobo lomuntu ofuna ukuba yilo esikhathini esizayo, ngokuhlola lokho okwazi ukukwenza, izinto odinga ukuthuthukisa kuzo, nalokho okukholelwayo. Ukuze uzihlole, ungaqala ngokuzibuza le mibuzo elandelayo.
Izinto engenza kahle kuzo: Yimaphi amakhono enginawo? Yini engikwazi ukuyenza kahle? (Ngokwesibonelo: Ingabe ngingumuntu ogcina isikhathi? okwazi ukuzilawula? okhuthele? ophanayo?)
ZAMA LOKHU: Ingabe uyahluleka ukuthola izinto owenza kahle kuzo? Buza umzali wakho noma umngane omethembayo ukuthi yini enhle ayibonayo kuwe nokuthi kungani esho kanjalo.
OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Yilowo nalowo makahlole umsebenzi wakhe siqu, khona-ke uyoba nesizathu sokwethaba ngokuqondene naye yedwa, hhayi ngokuziqhathanisa nomunye umuntu.”—Galathiya 6:4.
Izinto engidinga ukuthuthukisa kuzo: Yiziphi izinto engidinga ukuzithuthukisa ebuntwini bami? Kunini lapho kuba lula khona ukuba ngilingeke ukwenza into embi? Ikuphi lapho okufanele ngifunde khona ukuzibamba?
OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Uma sithi: “Asinaso isono,” siyazidukisa futhi iqiniso alikho kithi.”—1 Johane 1:8.
Engikukholelwayo: Imiphi imithetho yokuziphatha engiyilandelayo, futhi kungani? Ngiyakholelwa yini kuNkulunkulu? Yini engenza ngiqiniseke ukuthi ukhona? Yiziphi izinto engizibheka njengezingalungile, futhi kungani? Yini engikholelwa ukuthi izokwenzeka esikhathini esizayo?
OKUSHIWO IBHAYIBHELI: “Ikhono lokucabanga liyokuqapha, ukuqonda kuyokulonda.”—IzAga 2:11.
Ukwazi izinto ozikholelwayo, amakhono, ukulinganiselwa nemigomo yakho kuyokusiza ukuba wenze izinqumo ezihlakaniphile lapho ucindezelwa.
Thumelela Thumelela 9: Ukuzazi